Home https://isimbido.tv/soboba-casino-resort/ casino bonus bagging forum
Ndi isi ochichi nke ndi mmadu (PDP) ekwuola na arịrịọ President Muhammadu buhari na nzuko mba iji nweta uzo N242 ka akwadoro maka oru ndi ozo n’ememme 2018 iji kwado ego ndi otu aka na ndi otu ulo oru INEC. 2019 ntuli aka n’ozuzu.
Ndi otu biara n’ihu na ebubo nke onye isi oche a bu ihe ndi ozo na-eme ka ha duputa nhoputa ndi ochichi wee mebie usoro nile. PDP, na nkwuputa nke onye na-ekwuchitere ya, Kola Ologbondiyan kwuru na ihe Buhari bu imebi nhoputa ndi ochichi, ebe o choputara na o ga-emefu ntuli aka 2019.
Ya mere, ọ na – akpọ ndị Niger na ndị mba ụwa ka ha mara na “arịrịọ a bụ atụmatụ ịkpachara anya iji mee ka esemokwu dị na polite ahụ, kpatara ọgba aghara na usoro ntuli aka ma tinye usoro maka nsogbu ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke nwere ike imebi omume nke ntuli aka . ”
“Onyeisi ahụ maara na arịrịọ ya enweghị ụzọ ọ ga-esi kwekọọ n’usoro iwu obodo na iwu ndị na-achịkwa na-eduzi ego nkwụnye ego nke enyerelarị maka ọrụ mmepe mmepe, ma ọ zigara Mgbakọ ahụ.
“Ọ bụrụ na Onyeisi ahụ kwadoro mba ahụ nke ọma ma enweghi ebumnobi na-enweghị isi, ọ ga-ezitela ego ọhụụ ọhụrụ na Mgbakọ Mba ahụ maka ego ọ bụla ọ na-achọ maka INEC, kama ịchọrọ maka nnweta esemokwu,” ka nkwupụta ahụ kwuru.
Ndi otu a kwuru na Buhari ghaghi ikwu okwu n’eziokwu na ndi Naijiria chọsiri ike maka ntuli aka ndi mmadu n’afo 2019 ma ha adighi njikere iburu ya ka onye obula rute ugbua obula ha choro maka onye isi oche ga-abia May 29, 2019.N’odi ozo , Onye isi oche nke isi oche nke PDP, Chief Uche Secondus, ekwuola na Gọọmenti Fọchị Buhari adabereghị na ndaba, karịsịa na ebe nchekwa.
Secondus kwuru nke a ụnyaahụ mgbe ọ na-edu otu ndị dị ike nke ndị otu ahụ, tinyere ndị Board Board of Trustees (BOT) onyeisi oche, Walid Jibrin; onye isi na-agbazi onye isi na onyeisi ndị isi, Abubakar Atiku; ndi isi ochichi ala na ndi isi ochichi, Attahiru Dalhatu Bafarawa na Sule Lamido; Onye isi oru ndi oru ozo, Kabiru Tanimu Turaki na onye isi ochichi nke agha, Gbenga Daniel, n’etiti ndi ozo, na nkasi obi gara obodo Sokoto.
O kwuru na ndị Naijiria nwere iwe ma ugbu a na-atụ egwu n’ihi ọbara-ọbara a na-ahụtụbeghị mbụ na-ewere ọnọdụ na mba nile. Dịka ya, mba ahụ ejirila ọnụ ọgụgụ ndị gburu ọbụna malite na January ruo ugbu a, na Federal Government anaghị eme ihe ọ bụla. na ndị Naijiria nọ na-enwe ihe mgbu ma na-atụ egwu oge na ebe ọ ga-eme ọzọ ma na-eche mgbe oge a ga-agwụ.vx
Tags: 2019BuharielectionhotihenemeIHENEME NOBODOihenemenobodoIsimbidoISIMBIDO POSTisimbido postsisimbido tvisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVLATESTnewnewsnobodoPDPPOLLpostposts